10 Matipi Kugara Mune Shape Mukufamba | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Matipi Kugara Mune Shape Mukufamba
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 28/03/2021)
Kugara muchimiro wakati uchifamba pasina mubvunzo kukahadzika. Kudya zvekuyedza zvinogara zviripo. Izvi zvakasanganiswa nekuzorora mune yako yenguva dzose yekurovedza muviri tsika iyo inowanzo kukonzera kuwa kubva mungoro yekusimbisa. Saka munhu anogara sei akakodzera achifamba? Izvo hazvina kuoma sezvaunofunga. Ingo namatira kune mashoma mashoma mitemo, kurovedzera mamwe masimba, uye iwe uchave unokwanisa kuuya kumba mune humwe hutano hukuru hwakatanga yako holide na.
Train Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, Iwo Akachipa Kwazvo Chitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
Famba Zvakawanda Zvamunogona Kuti Mugare Makakodzera
kunyange zvazvo kushandisa zvifambiso zvevoruzhinji inganzwika seyakareruka chirongwa, edza kufamba pachinzvimbo. Nzvimbo pfupi ndeipi yakanakira avo vasina kutyisa zvakanyanya, kunyangwe zvakanyanya iwe zvaunoita, zvakanyanya kusimba kwako paunenge uchifamba kuchawedzera. A long brisk walk can make all the difference when staying in shape while traveling for those who are already quite fit. Consider getting off your bus or taxi a few blocks before so that you can walk the rest. Zvitima zviriko, ehe saizvozvo, zvakare nzira yakakura yekutenderera kwete chete kubva kunyika kuenda kune imwe nyika, asi guta kuguta uye kunyange mukati memataundi. Svetuka kubva muchitima chako zvishoma kumbomira, and take in the sites and sounds of your holiday destination to maximize your ability to stay in shape while traveling.
Paka Iyo Yakakodzera Stuff
Kana iwe ukaronga nezvekugara muchimiro uchifamba, gadzirira kuenderera mberi uchimhanya, kana kufamba netsoka, kana kunyange kutasva bhasikoro iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unemidziyo yakakodzera. Ramba uchifunga izvi paunenge uchirongedza. Kana iwe uchizofanira kusarudza pakati peimwe joiri dzakapusa shangu kana vaviri veavava, rongedza hembe. Hakuchazove nechinhu chakaipisisa kupfuura kusvika kunzvimbo yakanaka yekuenda, uchiziva kuti UNOGONA kuda kuita zvekumhanya, uye kusakwanisa nekuti wakasiya geji chairo kumba. Kusimuka mangwanani uye kuenda kune jog ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuona. Pamberi pemunhu wese hapana kubva pamubhedha, nyika yakanyarara uye yakanaka. Iwe haugone kuita izvi mu jeans uye mabhutsu kunyange.
Kuisa parutivi 15 Maminitsi Ekugara Mune Shape Mukufamba
Kuramba uri muchimiro uchifamba ndizvo zvese zvekurovedza muviri. Iwe hautarisi kutarisira kuchengetedza wako muswe wawanda uye kusimba paunenge uchifamba kana iwe uchidya zvakawanda zvekudya, inwa yakawanda yezvinwiwa, uye usaite chero zvinoshanda. Iwe unongoda chete 15 maminetsi mangwanani ega ega kuti uwane mini Workout mukati. Kana iwe uri munharaunda yakasikwa yakaita sehombekombe, enda usati wabatikana, uye ita yoga kana kurovedza simba pajecha. Cardio inogona kuwanikwa nekumhanya, kwidza, kana kushambira nekukurumidza. YouTube ine akawanda makuru mavhidhiyo ane mazano epfupi, zororo-rakavakirwa kudzidzira kuchengetedza nekuvandudza kugwinya kana uchifamba. Edza kusanyanyisa manheru kana, sezvo izvi zvichizokanganisa mashandiro emangwanani uye pakupedzisira kunyatsoita chimiro iwe uchifamba.
Gara MuShape Mukufamba Nekudya Nehutano
Zvinonaka, mabhuruku mabhuruku uye zvimwe zvakanaka zvinogona kukanda kwauri kubva kuseri kwemagirazi emawadhi, asi chinogara chiri pfungwa yakanaka kuchengetedza zvine mwero huwandu hwesimba. Kudya zvibata, nematanho ese, asi usapfuure. Pinda mune mimwe michero yekudya kwemangwanani, uye saladhi yekudya kwemasikati kuti ikubatsire nekugara muchimiro uchifamba. Nenzira iyoyo iwe wakachengeta macalorie ako akaderera zvakakwana kuti ukwanise kutora zvishoma kudya kwemanheru.
Kugara muShape Mukufamba By Taking The Stairs
Kana iwe uchigara muhotera ine akawanda pasi, une mukana wakakwana! Panzvimbo yekutora kukwidza, tora masitepisi! Uku kuchinja kuri nyore kwemaitiro kunowana yakawanda yakawanda Cardio mukati mako zuva rega rega, uye kukugadzirira iwe kuti uwane hwakagwinya uye hwakafanira rwendo. Kana iwe usina kana masitepisi kana imwechete ndege, tsvaga vamwe munzvimbo yako iripedyo uye unomhanya nekudzika navo iwo mashoma nguva kuti ubatsire nekugara muchimiro uchifamba.
Kutasva Bhasikoro Kugara Mune Shape Mukufamba
Nenzira imwechete iyo isu takakurudzira kuti ufambe pane kutora bhazi, edza kuhaya bhasikoro pane kubata chitakuri. Nyika zhinji dzichava mabhasiketi aripo ekurenda. Bata chitima kuenda pedyo kwaunoda kuenda, wobva watora bhasikoro munzira yose. Paunoda kudzoka, ingotenderera kudzokera ku chiteshi chechitima uye siya bhasikoro rako kwawakariwana, zvakanaka kugara muchimiro uchifamba!
Tarisa uone Mabasa Emunharaunda Uye Gara MuShape Mukufamba
Nyika zhinji dzine mabasa emuno akarongwa mumaguta. Yoga kana calisthenics mumapaki kana vakarongeka zvinowanika. Joinha mune izvi zviitiko kuti ugare uine chimiro paunenge uchifamba. CrossFit ndechimwe chinhu chepasi rose chinogadzirisa kusimba kwemitezo, saka tora imwe nguva kunze kwehurongwa hwako kuti ubatane nekirasi, kana mukati kana kunze. Your local guide or concierge should be able to point you in the right direction for these.
Shandisa Zvitima Zvekutandarira Nenhandare Yezvekufamba Zvitima
Zvakawanda zvinonakidza sekufamba nechitima ndiko, kune mukana wakawanda wekuti wekurovedza muviri uchiri kufamba. Izvo zvakafanana zvinoenda kune ndege. Paunenge uchimirira ndege yako kana chitima, tora mukana wekuputira mune mamwe mahedhifoni uye tora brisk yekufamba-famba uchitenderedza terminal kuti ubatsire kugara mune chimiro uchifamba. Ive nechokwadi chekuti mutoro wako wakachengeteka kutanga, zvisinei! Gara uchisiya kutakura kwako nemunhu waunovimba naye. Paunofamba, kusanganisa imwe lunges mune kufamba. Unogona kutaridzika kuseka, asi muviri wako unozokutenda gare gare. Kugara muchimiro uchifamba kunosanganisira kutora mukana wese unozviratidza wega. Bhuka tikiti rako rechitima online izvozvi, uye uzvipe nguva yakawedzerwa yekushandisa zvine simba kuti Ugare mune chimiro!
Rongedza Mabhandi Ekukwana Kwako Kuti Ugare MuShape Uri Kufamba
Mabhendi ekurovedza muviri akareruka, nyore kutakura uye nzira huru yekugara yakaderera paunenge uchifamba. Unogona kuvamisa ivo mukamuri yako, uye gadzira mini-ejimu dunhu munzvimbo inonyanya nyore nzvimbo. Tora nguva zuva rega rega kuita denderedzwa kana shanu wedunhu rako, uye hauzonzwi zvakashata pamusoro pekudya zvese zvinonaka zvinonaka.
Kuita jongwe rakadaro padziva, kana bhuru rine zvicherwa mumuti rinogara rakanaka. Overdoing it will result in a drop in your fitness. Not just because of the sugar but also the lack of motivation the next day. Iva newaini isinganzwisisike kana uchida, asi edza kuzvichengeta zvishoma. Rangarira kuti shuga sosi inotapira yakanyanya kwazvo mumakoriori, sezvakaita doro uye newaini chena. Kuzvishandira kubatsira kubatsira kugara mune chimiro uchifamba kuchaita kuti zvaunoronga zviwedzere kushanda.
Kufamba kwakawanda kunonakidza muzviitiko zvakawanda. Zvinogona, zvisinei, nyonganisa zvakanyanya kune chero hutongi hwehutano. Kugara muchimiro wakati uchifamba kunosanganisira kunamatira kuhurongwa hwekudya zvine hutano uye kupinda mukurovedza muviri kwakawanda paunokwanisa. Usakanganwa kudzikisira zvidhakwa zvine doro. Sarudza Save A Train, tinoda kukubatsira kuti unakirwe nerwendo rwako!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Matipi Kugara Mune Shape Mukufamba” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-staying-shape-traveling%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kutsiva es kuti fr kana nl uye nemitauro yakawanda yesarudzo yako.